Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange. 1 Rois 19,5
Lesona 13: Ilay fitsaharana fara-tampony
"Samy maniry valiny haingana sy mivantana isika rehetra rehefa mivavaka, ary alaim-panahy ho kivy rehefa mitaredretra izany valim-bavaka izany, na miseho amin'ny endrika tsy araka izay nandrandraintsika. Hanao mihoatra lavitra sy tsara kokoa ho antsika Izy noho ny hoe hanatanteraka ny faniriantsika fotsiny. Ary satria azontsika atao ny mitoky amin'ny fahendreny sy ny fitiavany, dia tsy tokony hangataka Azy hanatanteraka ny sitrapontsika isika, ny tokony hataontsika dia ny mikatsaka izay hahatanteraka ny sitrapony. Ny sitrapony no aoka hiankinan'ny faniriantsika sy izay zavatra mahaliana antsika."- GW, t. 2 19 .
"Kely monja sisa ny fotoana dia ho avy i Jesôsy hamonjy ny zanany sy hampitafy azy ireo ny tsy fahafatesana (...) Hisokatra ny fasana, ary hivoaka avy ao amim-pandresena ny maty ka hihiaka hoe: "Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? "Hivoaka avy ao am-pasana ireo malalantsika natory tao amin'i Jesôsy ka hitafy ny tsy fahafatesana."- CS, t. 350.
1. Saino ny amin'ny fifanandrinan-kery lehibe. Ahoana ny fahitanao izany eto amin'izao tontolo izao? Ahoana ny amin'ny fiainanao manokana? Tena misy tokoa izany, sa tsy izany? Tena zava-misy mihoatra noho izay heverin'ny ankamaroan'ny olona izany, satria maro no tsy mino fa tena misy tokoa ny devoly. Zava-dehibe manampy antsika hahatakatra ny mahazo an'izao tontolo izao ny fahatakarana ny amin'ny fifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy, nahoana? Mampahery tokoa ny fahatakarantsika fa hisy farany izany fifanandrinana izany, nahoana?
2. Mety hampikorontana ny saina ny faminaniana raha miezaka manakatra ankoatra izay efa ambara isika. Impiry moa isika mambra no manana olana, mamantatra mialoha ny toe-javatra ho avy isika na koa mino ny filazana mialoha ataon`ny hafa kanjo tsy nitranga akory izany! Ahoana no hiarovantsika ny tenantsika tsy ho latsaka amin'ny fandrika toy izany?
3. Diniho ao amin'ny kilasy ny Apôk. 14:9-11 sy ny firesahana momba ireo miankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny izay tsy manana fitsaharana. Inona no tian'izany hambara?
4. Misy lohahevitra mampiady hevitra ao amin'ny fiangonana izay milaza fa miankina amin'ny fanaovantsika asa na tsia ny fotoana hiavian'i Kristy. Na inona na inona toerana misy antsika mikasika izany, nahoana no zava-dehibe ny hiasantsika ho fanapariahana ny hafatra mikasika ny fiverenany eto amin'ity tontolo ity?